Bit By Bit - Idebe ihe omume - 2.3.5 Enweghị ike
Data nke ụlọ ọrụ na gọọmentị nwere ike isiri ndị na-eme nnyocha ohere ịnweta.
Na May 2014, US National Security Agency mepere ụlọ ọrụ data n'ime ime obodo Utah na aha ọjọọ, Intelligence Community Comprehensive National Cybersecurity Initiative Data Center. Otú ọ dị, a na-akọ ụlọ data a, nke a bịara mara dị ka Utah Data Center, nwere ike dị ịtụnanya. Otu akụkọ na-ekwusi ike na ọ nwere ike ịchekwa ma dezie ụdị nkwurịta okwu ọ bụla gụnyere "ọdịnaya zuru ezu nke ozi ịntanetị onwe, oku ekwentị, na ọchụchọ Google, yana ụdị ụzọ ntanetị nke onwe-ịdefe ụgbọala, njem njem, ụlọ ahịa ụlọ ahịa , na dijitalya di omimi di iche '' (Bamford 2012) . Na mgbakwunye na ịkwalite nchegbu banyere ọdịdị dị nro nke ọtụtụ ihe ọmụma ndị e weghaara na data buru ibu, nke a ga-akọwa n'okpuru ebe a, Ụlọ Ọrụ Data Ntu bụ Utah bụ ihe atụ zuru oke nke ihe ọmụma data bara ọgaranya nke na-enweghị ike ịchọta ndị nchọpụta. N'ikpeazụ, ọtụtụ gọọmentị na-achịkwa ọtụtụ isi ihe data buru ibu nke ga-aba uru (dịka, data ụtụ na data mmuta) ma ọ bụ ụlọ ọrụ (dịka, ajụjụ maka nyocha engines na ntaneti data meta-data). Ya mere, ọ bụ ezie na isi mmalite data a dị, ha abaghị uru maka ebumnuche nke nchọpụta ọha na eze n'ihi na ha enweghị ihe ịga nke ọma.
Na ahụmahụ m, ọtụtụ ndị na-eme nnyocha na-agụnye na mahadum aghọtaghị isi iyi nke enweghị ike ime. Ihe omuma a abughi obughi n'ihi na ndi mmadu na ulo oru na ndi ochichi bu ndi nzuzu, umengui, ma obu ndi n'echeghi. Kama nke ahụ, enwere iwu, azụmahịa, na njedebe omume nke na-egbochi ịnweta data. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ nkwekọrịta nkwekọrịta nke ọrụ maka weebụsaịtị na-enye ohere ka ndị ọrụ were ọrụ iji rụọ ọrụ. Ya mere, ụfọdụ ụdị nke ịkekọrịta data nwere ike ịmepụta ụlọ ọrụ na ikpe ziri ezi n'aka ndị ahịa. E nwekwara nnukwu ihe ize ndụ azụmahịa na ụlọ ọrụ ndị na-ekere òkè na data. Gbalịa iche n'echiche otú ndị mmadụ ga-esi meghachi omume ma ọ bụrụ na data nchọta nke onwe onye si na Google dị ka akụkụ nke ọrụ nyocha nke mahadum. Ihe ndekọ dị otú ahụ, ma ọ bụrụ na ọ dị oke njọ, nwere ike bụrụ ihe ize ndụ dị adị maka ụlọ ọrụ ahụ. Ya mere, Google-na ọtụtụ ụlọ ọrụ buru ibu-dị oke ize ndụ - mgbagha banyere ịkọ data na ndị nchọpụta.
N'ezie, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla nọ n'ọnọdụ iji nye ohere inweta ọtụtụ data maara akụkọ banyere Abdur Chowdhury. N'afọ 2006, mgbe ọ bụ isi nyocha na AOL, o ji aka ya hapụ ndị obodo nyocha ahụ ihe o chere na ọ bụ ndị ọrụ AOL 650,000 edenyere ajụjụ. Dịka m nwere ike ịkọ, Chowdhury na ndị na-eme nchọpụta na AOL nwere ezi ebumnuche, ha chere na ha edebawo data ahụ. Ma ha ezighi ezi. Achọpụtara na ngwa ngwa na data ejighị aha dị ka ndị na-eme nchọpụta chere, ndị na-ede akụkọ na New York Times wee nwee ike ịchọpụta onye dị na dataset ahụ (Barbaro and Zeller 2006) . Ozugbo a chọpụtara nsogbu ndị a, Chowdhury wepụrụ data sitere na ebe nrụọrụ weebụ AOL, ma ọ bụ akaha. E zigara data na ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ, ọ ga-enwekwa ike ịnweta mgbe ị na-agụ akwụkwọ a. A chụpụrụ Chowdhury, ndị isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka nkà na ụzụ nke AOL kwapụrụ (Hafner 2006) . Dị ka ihe atụ a na-egosi, uru ndị dị iche iche nọ n'ime ụlọ ọrụ na-eme iji nweta ohere data bụ obere obere na ọnọdụ kasị njọ dị njọ.
Otú ọ dị, ndị na-eme nchọpụta nwere ike ịnweta data nke na-apụghị irè na ọha na eze mgbe ụfọdụ. Ụfọdụ gọọmentị nwere usoro nke ndị nchọpụta nwere ike ịgbaso iji tinye maka ohere, yana dịka ihe atụ mgbe e mesịrị na isi isiokwu a, ndị na-eme nchọpụta nwere ike nweta ohere ụfọdụ na data ụlọ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, Einav et al. (2015) soro onye na-eme nchọpụta na eBay na-amụ ihe n'ịntanetị. M ga-ekwurita banyere nchọpụta nke sitere na mmekota a na-esote n'isiakwụkwọ, mana m kwuru ya ugbu a n'ihi na ọ nwere ihe anọ niile nke ihe ndị m na-ahụ n'ịmekọrịta nke ọma: onye nchọpụta na-achọ nchọpụta, ike nchọpụta, mmasị ụlọ ọrụ, na ike ụlọ ọrụ . Achọpụtala m ọtụtụ ọrụ mmemme ga-ada n'ihi na onye nchọpụta ma ọ bụ onye ọlụlụ-ọ bụrụ na ọ bụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ ọchịchị-enweghị otu n'ime ihe ndị a.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịmepụta mmekorita ya na azụmahịa ma ọ bụ nweta ohere ịchọta data gọọmenti, Otú ọ dị, enwere ụfọdụ ebe ị ga-esi nweta ya. Nke mbụ, ị gaghị enwe ike ịkọrọ ndị nchọpụta ndị ọzọ data gị, nke pụtara na ndị nchọpụta ndị ọzọ agaghị enwe ike ịchọpụta ma gbasaa nsonaazụ gị. Nke abụọ, ajụjụ ndị ị nwere ike ịjụ nwere ike ịbelata; O yikarịrị ka ụlọ ọrụ ọ ga-ekwe ka nchọpụta nwere ike ime ka ha dị njọ. N'ikpeazụ, mmekọrịta ndị a nwere ike ịmepụta ma ọ dịkarịa ala ọdịdị nke esemokwu, ebe ndị mmadụ nwere ike iche na mmekọrịta gị na-emetụta utịp gị. Enwere ike ịdọta nsogbu ndị a nile, ma ọ dị mkpa ighota na ịrụ ọrụ na data nke na-enweghị ike inweta onye ọ bụla nwere ma mgbada na ala.
Na nchịkọta, ọtụtụ data buru ibu enweghị ọnụọgụ nye ndị nchọpụta. Enwere ezigbo iwu, azụmahịa, na njedebe ụkpụrụ omume nke na-egbochi ịnweta data, ma ihe mgbochi ndị a agaghị aga ebe nkà na ụzụ na-eme nke ọma n'ihi na ha abụghị ihe mgbochi teknụzụ. Ụfọdụ gọọmentị mba emeela usoro iji nye ohere ịnweta data maka ụfọdụ datasets, mana usoro ahụ bụ karịsịa ad hoc na steeti na mpaghara. Ọzọkwa, na ụfọdụ, ndị na-eme nnyocha nwere ike iso ndị ụlọ ọrụ na-enweta ohere data, ma nke a nwere ike ịmepụta ọtụtụ nsogbu maka ndị na-eme nchọpụta na ụlọ ọrụ.